'UMaskandi usufana nemboni yamatekisi kanjalo namaqembu epolitiki' | News24
'UMaskandi usufana nemboni yamatekisi kanjalo namaqembu epolitiki'
Durban - Kuthiwa kudutshulwe kwabulawa uGxabhashe obeyinduna yabalandeli beChalaha kudutshulwa emcimbini kaMaskandi eCurries Fountain izolo ebusuku, akukacaci kahle ngomlandeli waMageza Amahle osesibhedlela okuthiwa uhlinzwe ebusuku wakhishwa inhlamvu, kanti bayisithupha abanye abalandeli abasezibhedlela nabo abalimele.
UMphori Griva Umaskandi uthe: Usufana nebhizinisi lamatekisi! Usunezinkabi ngaphakathi uyangethusa manje sengisaba nokuwudlala impela kwazibani ngingaze nami ngibulawele emotweni ngokuzidlalela umculi engimthandayo ngivulele phezulu ngcono ngibuyele kowe-House.
UCyril Mzwakhe uthe: Weh umaskandi usaphenduka amaqembu ezopolitiki noma inkabi zabanikazi bamatekisi, ingakho ngidlala umculo walaba abadala. Le genge yamanje isiyabheda, kuhle ngizidlalele uPhuzekhemisi, Abafana basemawoti, umfazomnyama, ngikhohlwe ilaba bamanje.
UDumisani Maseko uthe: Yingakho ngiwunyanya mina umaskandi ngawubona ukuthi unodlame. Bonke abaculi bawo bazenza ngcono, awuhlikile nembhoni yamatekisi kuyadutshulwana kufe bantu. Ayikho inhlonipho.
USihle Madondo uthe: Ufana nepolitiki abantu bakithi, abamnyama balwe bashone, laba abaphezulu ezikhundleni abathinteki.